Hishiis ku aadan dhanka meletariga oo ay kala saxiixdeen dowladaha soomaaliya iyo suudaan |
Hishiis ku aadan dhanka meletariga oo ay kala saxiixdeen dowladaha soomaaliya iyo suudaan
Dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan dhanka ciidamada,heshiiska ayaan ka danbeeyey wadahadalo maalma qaatay oo magaalada Kahrtuum ay ku yeesheen wasiirada gaashaandhigga wadamada Suudaan iyo Soomaaliya.
Saxiixa heshiiska oo ay goob joog ka ahaayeen wasiirada gaashaandhigga Soomaaliya C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi iyo dhiggiisa Suudaan C/rixiin Maxamed Xuseen ayaa waxaa qalinka ku wada duugay gudoomiyaha maxkamadda ciilamada qalabka sida ee Soomaaliya Gen.Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” iyo gudoomiyaha garsoorayaasha ciidamada Suudaan Axmed Jaamac.
Heshiiska ayaa intiisa badan ku saabsanaa dhanka Milateriga,waxaana ku xusay heshiiskan inuu noqdo mid si deg deg ah u dhaqan gali doona,waxaana kamid ah qodobada heshiiskaa in dalka Suudaan uu sida ugu dhaqsaha badan tababaro ciidan ay siiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya.
Waxaa qudbad ka jeediyey wasiirka Gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi munaasabad casho sharaf ah oo lagu sagootinayey waftiga dowladda Soomaaliya ayaa dowladda Suudaan uga mahadceliyey taageerada aan kala go’a lahayn ee ay la barbar taagan tahay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed.
Wasiirka Gaashaandhigga Suudaan C/rixiin Maxamed Xuseen oo isne goobta ka hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Suudaan aysan kala ahayn laba dal balse ay yihiin hal shacab oo walaalo ah,wuxuuna ballan qaaday in Suudaan iney si deg deg ah u hirgalin doonto heshiiskan cusub ee lagu dhisayo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.